UNICEF Somalia - Media centre - Fursadaha Dhallinyarada Soomaaliyeed waysii kordhayaan maadaama Jaamacaddii Umadda Somaaliyeed dib u heshay xarunteedii guud
Xarunta waxaa adeegsan jiray ciidammo kaladuwan, waxaana amnigeeda qaabilsanaa ciidamada Burundi ee ka tirsan Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) waxayna guutadaas u ahayd talis-guud in kabadan toban sannadood. Ciidamadaas waxa imminka loo beddelay gobolka Shabeellaha Dhexe. Dhismayaasha Xarunta Jaamacadda iyo meesha ay ku taallaba dib-u-habayn ayaa lagu sameeyay intii aan la wareegin.
“Tani waa tallaabo fiican/togan, waxaana ay diraysaa farriin xooggan oo ah muhiimadda ay leedahay in hubanti laga dhigo dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee xaqa u lihi in ay helaan fursad ay ku sii wataan waxbarashadooda kadib marka ay soo dhameeyaan dugsiyada hoose iyo dugsiyada sare si ay u noqdaan hoggaamiyeyaasha mustaqbalka,” sidaas waxaa yiri Vincent Lelei, Kuxigeenka Isuduwaha Hawlaha Gagaarka Bani’aadamnimada, oo ka qaybgalay xafladda lagula kala wareegayay Xarunta Jaamacadda.
Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed (SNU), oo ahayd jaamacaddii ugu horraysay ee Soomaaliya yeelato waxaa la dhisay 1954, waxaa dib loo furay 2014 kadib markii ay xirnayd in kabadan labaatan sannadood oo dagaallo sokeeye socdeen. Intaas wixii ka dambeeyay ardaydu waxa ay adeegsan jireen xarumaheeda kale si ay u bartaan maadooyinka waxbarashada, sharciga, daawooyinka, injineernimada iyo kuwo kale.
Dib-u-furitaanka SNU ujeeddada laga leeyahay waxa ay ahayd in la hubiyo bixinta waxbarasho la awoodi karo oo leh tayo aad u sarraysa taas oo fursad ay waxbarasho sare ku sii wataan u noqonaysa dadka aan awoodayn in ay wax ka bartaan jaamacadaha gaarka loo leeyahay ee waddanka oo dhan ku faafey.
Soomaaliya waxa ay kamid tahay dalalka heerkoodu ugu hooseeyo marka la eego isqoritaanka waxbarashada dugsiyada hoose, iyada oo 3dii ardayba midkood iskuul tago, iyo weliba abaarta dabada dheeraatay oo kumanaan arday ah ku qasabtay in ay waxbarashadii iskaga haraan. Ilaa bilowgii sannadkan UNICEF iyo bahwadaagteedu waxa ay gacan ku siiyeen/ku taageereen in kabadan 104,000 oo arday sidii ay waxbarashadooda u sii wadan lahaayeen ama dib ugu noqon lahayeen dugsiyada.
Xafladda lagula kala wareegayay Xarunta guud ee SNU oo ay ka soo qaybgaleen saraakiil sarsare oo katirsan xukuumadda, wakiilo ka socda UN iyo AMISOM, waxaa hagayay/hogaaminayay Cabdirahman Daahir Cusmaan oo ah Wasiirka Tacliinta Sare ee Dawladda Federaalka, kaas oo caddeeyay in waxbarashadu tahay aasaaska horumar waara.Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha Guud, Michael Keating, ayaa carrabka ku adkeeyay in waxbarashadu tahay seeska ugu muhiimsan ee dib-u-dhiska dalka.
“Waa muhiim in adeegyada waxbarashada iyo caafimaadku noqdaan kuwo ka madaxbannaan, islamarkaana aysan adeegsan ciidamadu si loogu ogolaado in dadku si fudud u heli karaan adeegyada muhiimka ah gaar ahaan xilligan lagu jiro abaarta dabada dheeraatay,” sidaas waxaa yiri Jeremy Hopkins, wakiilka UNICEF ee Soomaaliya, waxaanu intaas raaciyay “Sidoo kale waa inaynu fiirinnaa mustaqbalka. Dhallinyarada Soomaaliyeed waa kuwa ugu faraha badan bulshada, Jaamacadda dawladduna waxa ay siinaysaa fursad qofku inta uu nool yahay mar keliya soo marta.”
UNICEF waxa ay horumarisaa xuquuqaha iyo fayo-qabka canug walba, hawl kasta oo aanu qabanayno. Annaga iyo kuwa aannu iskujaalka/bahwadaagta nahay waxaannu ka shaqaynaa 190 waddan iyo deegaanno si aannu ballanqaadyadaas ugu rogno waxqabad dhab ah, annaga oo diiradda si gaar ah u saarayna in aannu gaarno carruurta aadka u nugul ee la dayacay, si carruurta oo dhami uga faa’iidaystaan meel kastaba ha joogaane.
Lasoco Facebook and Twitter UNICEF Soomaaliya
Wixii tafasiil dheeri ah, fadlan laxiriir: